Wasiir Maxamed Kaahin oo Ka war-bixiyey geerida Taliyaha Ciidamadda Booliska Somaliland – WARSOOR
Hargeysa – (WARSOOR) – Xukuumadda Somaliland ayaa warbixin ka soo saartay geerida ku timid Allaha ha u naxariistee Taliyihii Ciidamada booliska Somaliland, Sareeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan oo xalay ku geeriyooday Cisbitaal Guude ee magaalada Hargeysa.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland, Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa ka tacsiyadeeyey geerida Sareeye Gaas Fadal Madaxweynaha Somaliland, ciidamada iyo dhamaan Shacbiga Somaliland oo dhan.
Wasiir Kaahin ayaa sheegay in taliye Fadal uu ahaa mas’uul xilkas ah oo wax badan u soo qabtay Somaliland, islamarkaana aysan iloobi doonin dadaalkiisii iyo sida uu uga shaqeeyey horumarka iyo nabadeynta deegaanada maamulkaasi.
Allaha u naxariistee marxuumka ayaa lagu wadaa in saaka aas Qaran loogu sameeyey gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka gooni isu taaga ee Somaliland.
HALKAN KA DAAWO SHIRKA JARAA’ID